Xinhua Myanmar - ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူခဲ့သော Sinovac ကာကွယ်ဆေးများ ထပ်မံရရှိ
ဖိလစ်ပိုင် တရုတ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ဆေး
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော Sinovac ကာကွယ်ဆေးများအား သယ်ယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ) WORLD
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မျိုးကွဲများ ပို၍ကူးစက်မှုများကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှု များပြားလာသဖြင့် ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်နေသည်။အစိုးရအနေဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ စတင်၍ လူအများကြား ကိုယ်ခံအားစနစ် ရရှိစေရန်အတွက် ယခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး သန်း ၇၀ အထိ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံသွားရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော Sinovac ကာကွယ်ဆေးများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသည့် Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမသုတ်သည် ဖေဖေဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ်အား မတ်လ ၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဌာန(DOH)၏ ထုတ်ပြန်မှုအရ ဧပြီ ၁၁ ရက်တွင် COVID-19 လူနာသစ် ၁၁,၆၈၁ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး လူနာပေါင်း ၈၆၄,၈၆၈ ဦးအထိ ရှိလာခဲ့သည်။ COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးသူအသစ် ၂၀၁ ဦး အပါအဝင် သေဆုံးသူပေါင်း ၁၄,၉၄၅ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
MANILA, April 12 (Xinhua) -- The Philippines on Sunday received the second batch of Sinovac Biotech's CoronaVac vaccines purchased from China.
The Philippine Airlines, which flew the vaccines to Manila, handed over the shipment to Carlito Galvez, the official in charge of the Philippines' vaccine procurement efforts.
The Philippines' Department of Health (DOH) reported on Sunday 11,681 new confirmed cases of COVID-19, bringing its total tally to 864,868. The COVID-19 related death toll rose to 14,945 including 201 more deaths newly recorded in the Southeast Asian country. ■
Previous Article အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၇၀,၀၀၀ ဦးကျော် ရှိလာ
Next Article ကူးစက်မှုလှိုင်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နေ့စဉ် COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်